Doorashada iyo xisbiyada siyaasadda | Samfunnskunnskap.no
Labadii sanno ba mar waxa ka dhaca Norwey doorasho siyaasaddeed. Waxa ay isu bedeshaa doorashada baarlamaanka iyo doorashada golaha deegaanka (guddida gobolada iyo degmooyinka doorashadooda). Afartii sanno ba waa mar doorashada baarølamaanku, sidoo kale waxa ah ta guddida gobolada iyo golaha deegaanka.
Xisbiyada siyaasadu waxay shirweynahooda ku soo go’aamiyaan barmaamijyadooda. Barnamijkooda waxa ku qoran kiisaska ay rabaan in ay ka shaqeeyaan afarta sanno ee soo socda, waxay taasi tahay doorashada soo socota.
Doorashadu waa qarsoodi Norwey. Taas waxa looga jeedaa inaan cidna ogaan karin cidda aad u codaysay, uma na baahnid in aad xataa cid kale u sheegto Adiga ayey kugu xidhantahey cidda aad codkaaga siineyso, wax aan caadi ahayna ma aha in xubnaha qoysku u kala coddeeyaan si kala duwan.
Waxa jira xibiyo siyaasaddeed oo badan Norwey. Marka ay doorasho jirtana waa kala doorasho badan oo aad kala dooran kartid. Waxa ilaa 20 xisbi siyaasaddeed Norwey.
Waxaan xisbiyada waaweyn u kala saari karaa kuwo hatiwadaag ah «sosialistisk» iyo hantigoosi «borgerlig» sida:
Awood rasmi ah iyo mid aan rasmi ahayn
Siyaasiyiinta baarlamaanku waxey dejiyaan sharciyada, wax ka bedelka sharciga iyo miisaaniyada. Sidan ayey u leeyihiin awood rasmi ah si ay s1aameyn ugu yeeshaan nooca siyaaasadeed ee lagu hagayo qaranka iyo hoosba. Sidoo kale waxa jira kooxo badan oo leh waxa aan ugu yeedhno awood aan rasmi ahayn. Taas macnaheedu waxa weeye iney siyaabo kala duwan siyaasada saameyn ugu leeyihiin.
Warbaahinta (idaacadaha, barta netka, wargeysyada iwm) ee Norwey waa xor. Taas oo macnaheedu yahay inay daabici karaan macluumaad kasta oo ay doonayaan, iyada oo aan ku xidhaneyn xisbiga talada haya. Laakiin warbaahintu waa in ay ku xadka xorriyadda hadalka. Warbaahintu waxey leedahay saameyn weyn. Waxaan nidhaahnaa warbaahintu waxey dejisaa ajendaha oo ay u shaqeyso sidii waardiye/ilaalo marka ay wax khaldamaan. Sidan ayey saameyn ugu yeeshaan daawadayaasha /akhristayaasha / dhageystayaasha iyo siyaasiyiintaba.
Norwey waxaa ka jira xornimo urur. Tan micnaheedu waxa weeye, in muwaadiniintu si xor ah u sameyn karaan oo ay ugu biiraan ururada danaha ee kala duwan.
Tusaalooyinka ururada noocan ah waa:
ururada dadka leh kala-dhantaalnaan iyo xannuuno kala duwan
Ururada xuquuqda haweenka
Ururada xuquuqda carruurta
Ururada dhawrista deegaanka iyo dabeecadda
Ururada u doodada kiis kala duwan ee degmooyinka
Sida warbaahinta, ururada noocan oo kale ah waxey ku yeelan karaan saameyn weyn. Waxey saameyn ku yeeshaan dhegaystayaasha/ akhristayaasha /dhageysteyaasha iyo siyaasiyiinta labadaba. Markay dadku ama ururadu isku dayaan inay saameyn ku yeeshaan siyaasiyiinta iyo go’aanadooda qaabab aan rasmi ahayn, waxaan ugu yeernaa olole.
Si aad u codayso doorashada golaha gobolada iyo golayaasha deegaanka waa in aad Norwey degganayd saddexdii sanno ee ugu danbeeyey doorashada ka hor.